Ropa tsono rinogona kukamurwa kuita:
1. Subcutaneous yeropa inosanganisirwa tsono: kazhinji-yakakomberedzwa nhatu sindano uye yesimbi solid solid sindino; Pierce ganda rinobva kure kana kuti mudzi wegumbo retsoka kuti utore ropa. Masero eropa uye biochemical, histological, microbiological, virological, uye genetic test; Inoita zvinhu zvakasiyana-siyana. Nekurumbira kwezvino zvemazuva ano zvekushandisa zviridzwa uye nzira. Yakawandisa zvekuti zvishoma nezvishoma inotsiva yakawanda yekuongororwa kweropa rekuunganidzira.
2. dzakasiyana-siyana zvinowedzeredzwa zviri mumudziyo kupedzisa kufungidzira kwekutanga kwefungidziro); Semuenzaniso, anticoagulation, nekukurumidza coagulation, nezvimwe .; Zvinoenderana nechimiro, neropa rinhonga sindano rinogona kukamurwa muzvikamu zviviri: pen-Type yeropa inhonga sindano uye rakapatsanurwa-mhando ropa rinotora sindano. Kunze kuchinyoreso - yakavakirwa tsono, iyo nyika yekukamura - mhando.
3. Artery yeropa sampling sindano: Kutaura zvinyowani, iko kuyerera kwemagetsi, artery ropa nerino cheni yekuisa chisimbiso yakapera munzvimbo yakavharwa; Kubva pamaonero eumbirwo, iri syringe yakakwana ine sealant block, iyo inovhara musoro wedonhi nekukurumidza mushure mekuunganidzwa. Kuchengeta ropa rekunze kwese kwese kwese kwakanyungunuka zvimwe zvirimo hakuchinje. Sekuongororwa kwegesi yeropa, kuti unzwisise basa reiyo cardiopulmonary.
Kubva pane zvinonzwisiswa pamusoro, unogona kutaura nenzira chaiyo, mashandisire eropa rekuti:
1, subcutaneous ropa rekuunganidza masingano: mushure mekuraira ganda kusagadzikana, minwe inobata subcutaneous ropa rekuunganidza sindano mune subcutaneous tishu, avhareji yakadzika ye3mm mm (zvichienderana nezera revarwere, ganda nematehwe), wozoshandisa munwe kuenda svina nzvimbo yakarodzwa, sveta kudonha kweropa (kusadonha), kushandiswa kwesimba rinodzvinyirira bhora suction capillary suction, wobva waendeswa kuchiridzwa chekuongorora kana chinotsvedza chinofungidzirwa pombi blade kubiridzira, kuongorora dhayeti; Mukushandisa, cherekedza: munhu mumwe, imwe sindano, mumwe disinfection, mumwe kuraswa marara;
2. Veneous yeropa sampling sindano: sarudza yakakodzera yepamusoro pein yein disin kasiti; Sunga bhanhire rinodzvinyirira (cherechedzo: hachisi chiitiko chemitambo, uye haisi bhandi rekutyaira kweropa); Zvinoenderana nezera remurwere uye nehuwandu hwemafungidziro akaunganidzwa, zviyero zvakasiyana zve sampuro dzeropa zvakasarudzwa peni-yakavakirwa tsono dzinofanirwa kusarudzwa kana huwandu hwacho huri pasi peburi rimwe chete kana matatu); Vakuru, vana havashande kana mitete yeropa, vanogona kusarudza yekumhara; Iyo tsono dhayamita yeropa sampling sindano haingaiti pasi pe 0,7mm, zvikasadaro maseru eropa anogona kutyoka zviri nyore uye "hemolysis" ichaitika. Mushure mekushandiswa, tsono inofanira kusiiwa mubhokisi rinokosha rekuraswa. Ita zvinyatso kuita: munhu mumwe, tsono, disinawon, kurasa tsvina;
3. Arterial yeropa sampling sindano: (inofanirwa kunge iri arterial ropa sampling kifaa): yakasimba disinfection inoreva uye kuita yekunze punaching; Gadzirira uye kumanikidza zvemidziyo yekupfeka; Mushure mekubudirira kwema artery punication, piston ye syringe inosundirwa kumashure neanodzvinyirira artery, uye ropa rekunze richakurumidza kuporeswa, senge syringe cylinder; Mushure mekusvika padanho rakarongedzerwa, gono rekupinza rakaburitswa nekukasira uye punctial yechirume yakamanikidzwa kumisa kubuda ropa. Nokukurumidza mushure mekudhonza tsono, pinza sindano muiyo sealant. Ipapo arterial yeropa sampuro yakatumirwa kuikamuri yekuongorora nekukurumidza.